Vaovao - Ny takelaka famonoana herinaratra dia karazan-tsarimihetsika fandrefesana herinaratra mihodina miaraka amina fehikibo azo antoka miraikitra amin'ny mekanika famonoana pnemika.
Ny paozy elektrika dia karazana boribory famonoana herinaratra rotary miaraka amina fiarovana azo antoka mifamatotra amin'ny mekanika famonoana pnemika.
Ny paozy elektrika dia karazana boribory famonoana herinaratra rotary miaraka amina fiarovana azo antoka mifamatotra amin'ny mekanika famonoana pnemika. Izy io dia afaka manokatra lavaka 6-100 mm amin'ny fitaovana mafy toy ny beton, biriky, vato, sns.
Ny toetra mampiavaka ny tantanana herinaratra
1. Rafitra fanararaotana fahatairana tsara: afaka manao izay hahamety ny mpandraharaha sy manala havizanana. Ny fomba hanatanterahana izany dia amin'ny alàlan'ny "rafitra fanaraha-maso vibration"; ny fehin-kibo malefaka dia entina hampitomboana ny fankaherezana;
2. Fanaraha-maso ny hafainganana haingam-pandeha: rehefa kasihana maivana ny switch, ambany ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana, izay afaka manampy ny milina hivoaka moramora (ohatra, mivoaka amin'ny faritra malama toy ny taila, izay tsy afaka misakana kely fotsiny tsy solafaka, fa miaro ihany koa ny fitrandrahana tsy ho vaky. Haingam-pandeha haingam-pandeha no azo ampiasaina amin'ny fiasa ara-dalàna mba hiantohana ny fahombiazan'ny asa.
3. Raikitra ny filaminana azo antoka sy azo antoka: fantatra amin'ny anarana hoe torque mametra ihany koa, azony atao ny misoroka ny herin'ny fihetsiky ny herinaratra avo lenta vokatry ny fametahana ny fantsona mandritra ny fizotry ny fampiasana, izay karazana fiarovana fiarovana ho an'ireo mpampiasa. Ity fampiasa ity koa dia manakana ny fitaovam-piadiana sy ny motera tsy hijanona.
4. Fitaovana fiarovana maotera feno: raha ampiasaina dia tsy azo ihodivirana ny hiditra ao anaty masinina ireo zavatra henjana (indrindra ny fandavahana miakatra amin'ny masinina, toy ny fandavahana eo an-tampon'ny rindrina). Raha tsy manana fiarovana manokana ny motera dia mora vaky na voarangotra amin'ny zavatra mafy ao anaty fihodinana hafainganam-pandeha, izay hiafara amin'ny tsy fahombiazan'ny motera.
5. Miasa sy miverina miasa: afaka manao be kokoa ny hammer izy io, ary ny endrika fanatanterahana azy dia ahatongavana amin'ny alàlan'ny fanovana na fanitsiana ny toeran'ny borosy karbonina. Amin'ny ankapobeny, fitaovana marika lehibe no hanamboatra ny toeran'ny borosy karbaona (mpihazona borosy mihodina), izay manana tombony azo amin'ny fiasa mety, famoretana moka mba hiarovana ny commutator ary hanitatra ny androm-piainan'ny maotera.
Ny drill twist no fitaovana fanodinana lavaka be mpampiasa indrindra. Amin'ny ankapobeny, ny savaivony dia manomboka amin'ny 0,25 mm ka hatramin'ny 80 mm. Ny zoro boribory amin'ny fihodinam-bokotra dia misy fiantraikany amin'ny haben'ny zoro fikororohana, ny tanjaky ny lelany ary ny fanesorana ny chip, izay matetika eo anelanelan'ny 25 ° sy 32 °.
1. Amin'ny ankapobeny, ny fandavahana mainty dia ampiasaina handefasana vy, ary ny akora fandavahana dia vy haingam-pandeha. Ny fandavahana amin'ny fitaovana vy ankapobeny (vy vita amin'ny firaka, vy tsy vita amin'ny firaka, vy vy, vy vy, vy tsy ferrous) dia ampiasaina miaraka amina fantsom-pitrandrahana vy. Na izany aza, tokony horaisina ny saina amin'ny fandavahana ireo vy, ary ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana dia tsy tokony ho avo loatra, ka mety handoro mora foana ny sisin'ny fantsona fandavahana.
Ankehitriny dia misy volamena vitsivitsy mifono sarimihetsika vy sarotra tsy fahita firy, vita amin'ny vy vy sy fitaovana hafa ary manamafy ny fitsaboana hafanana. Ny tendrony dia voahodina amin'ny zoro mitovy amin'ny andaniny roa ary mihodina kely hiverina hamorona sisiny maranitra. Tsy misy vy, vy ary alim-pito nohamafisin'ny fitsaboana hafanana. Mora ny mifikitra amin'ny vovo-drill ny aliminioma ary mila hosorana rano savony mandritra ny fandavahana.
2. Fitrandrahana akora vita amin'ny beton sy akora vita amin'ny vato, ny fampiasana fitrandrahana fiatraikany, ampiarahina amin'ny vato fandavahana vato, lohan-doha ho an'ny lohany dia karbida simenitra amin'ny ankapobeny. Fianakaviana tsotra, aza mandroroa ny rindrin'ny simenitra, ampiasao fandavahana tanana elektrika mahazatra 10 mm.
3. hazo fandavahana. Rehefa mandavaka fitaovana vita amin'ny hazo, ampiarahina amin'ny fampiasana tapa-kazo, dia manana habetsahan'ny fanapahana ny haben'ny hazo, ary ny hamafin'ny fitaovana fanapahana dia tsy ilaina avo. Ireo fitaovana fanapahana fitaovana amin'ny ankapobeny vy mahery. Misy tendrony kely eo afovoan'ny tendron'ny kely, ary ny zoro amin'ny lafiny roa dia somary lehibe, na dia tsy misy zoro aza. Ho an'ny toerana fanamboarana tsara. Raha ny marina, ny fandavahana vy dia afaka mandavaka hazo ihany koa. Satria mora manafana ny kitay ary tsy mora mivoaka ireo sombin-kazo dia ilaina ny mampihena ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana ary mivoaka matetika mba hanala ireo puce.
4. Ny fantsom-pitrandrahana ceramic tile dia ampiasaina handavahana lavaka amin'ny taila vita amin'ny keramika sy vera misy hamafin'ny avo kokoa. Ny firaka karbonika tungsten dia ampiasaina ho fitaovana fitaovana. Noho ny hamafiny sy ny hamafin'ny hamafiny dia tokony harahina ny fampiasana haingam-pandeha ary tsy ny fiatraikany.
Ny ampahany manapaka ny fandavahana fisaka dia miendrika angady, miaraka amina rafitra tsotra sy vidin'ny famokarana ambany. Ny tsiranoka fanapahana dia ampidirina mora foana ao anaty lavaka, saingy ratsy ny fanesorana sy ny fanesorana ny puce. Misy karazana drills fisaka roa: tsy mitambatra sy mivondrona. Ny karazana integral dia ampiasaina amin'ny micropores fandavahana miaraka amin'ny savaivony 0.03-0.5mm. Azo soloina ny elanelam-pitrandrahana fisaka ary azo asiana fampangatsiahana ao anatiny. Ampiasaina indrindra amin'ny fandavahana lavaka lehibe misy savaivony 25-500 mm.
Fitrandrahana lavaka lalina
Ny lavaka fandavahana lalina dia matetika fitaovana ho an'ny masinina fametahana izay ny tahan'ny halalin'ny lavaka amin'ny savaivony lavadrano dia lehibe kokoa noho ny 6. Ampiasaina matetika ny bongo, BTA Deep hole drill, jet drill, DF lavaka fandavahana lalina, sns. amin'ny fanodinana lavaka lalina.
Ny reamer dia manana nify 3-4, ary ny henjana dia tsara kokoa noho ny an'ny drill. Izy io dia ampiasaina hanitarana ny lavaka efa misy ary hanatsarana ny fahamendrehana sy ny famitana ny milina.
Ny fandavahana afovoany dia ampiasaina handefasana ny lavaka afovoan'ny zana-kazo. Izy io dia tena vita amin'ny fandavahana fihodinana sy ny facer misy zoro helix kely, ka antsoina koa hoe boribory afovoany.
Fananganana boribory dia anarana ankapobeny fandavahana martina elektrika sy fandavahana simenitra. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanokafana beton, rindrina ary sangan'asa hafa. Ny fisehoana ankapobeny dia tantanana mahitsy, ary ny lohany dia mifamatotra amin'ny lohan'ny fanapahana firaka. Tsy misy vohana ny lelany. Ny slot ihany.
Misy karazany roa ny fitrandrahana ala. Ny iray dia fandavahana fihodinana ala. Ny iray kosa dia fandavahana hazo fisaka. Ny fandavahana volo vita amin'ny hazo dia matetika antsoina hoe boriborin'ny hazo, miaraka amin'ny spikes 3 ao an-doha ary fanjaitra lava eo afovoany. Ny lafiny roa dia fohy kely miaraka amin'ny sisiny manapaka. Ny volo dia misy misokatra. Ny lohan'ny fandavahana hazo fisaka dia fisaka. Misy lavaka kely eo afovoany. Ny ambony dia fanjaitra toa. Tsy misy sisiny. (raha ny marina dia eo amin'ny faran'ny roa amin'ny lohany ny loha, miaraka amina baravarana mifanohitra.) Misy karazany roa ny tahony, mahazatra sy hexagonal.
Ny fantsom-pandavahana vy haingam-pandeha dia mizara fizarana boribory mahitsy ary fandavahana taper shank. Boroka fandavahana mitovy.